Atlas Copcoconsolidates asa fitrandrahana Shinoa - Sina Tianjin Longtop harena ankibon'ny tany
Amin'ny vahoaka nanao hetsika hampitombo ny fahombiazany sy ny hanamafy orina ny orinasa ho amin'ny ho avy.
Atlas Copco dia hanakatona ny toerana ao Shenyang, izay manufactures-tanana natao indrindra indrindra vatolampy drills ho an'ny harena ankibon'ny tany sy ny fanorenana, namindra toerana an'ireo asa ho an'ny zavamaniry ao Zhangjiakou. Ao Shenyang, tokony ho 225 ny olona ho fiantraikany.
Ao Zhangjiakou, Atlas Copco mamokatra any amin'izao fotoana izao-ny-lavaka fitaovana nampiasaina mba fandavahana blastholes, ny rano sy ny hafanana avy ao anaty vovo angovo fampiharana. Ao amin'io toerana, tokony ho 45 mpiara-miasa dia homena sy ny fampiasam-bola natao tao amin'ny trano fanitarana sy ny milina vaovao.
"Manana ny portfolio vokatra lehibe any Shina, fa amin'ny fitakiana malemy ao amin'ny harena ankibon'ny tany dia tsy maintsy tsena antoka fa hampiasa ny fahafahantsika ny fomba mahomby indrindra," hoy Johan Halling, filoha ny harena ankibon'ny tany sy ny fandavahana Rock Technique faritra raharaham-barotra.
"Fanamafisana ny asa, hanampy antsika handositra matanjaka amin'ny hoavy. Dia hanohana ny voa mpiasa ao amin'io toe-javatra sarotra. "
Samy asa voalohany indrindra hanompo ny tsena ao an-toerana Shinoa.